बलिउड गायिका नेहा कक्कडका पूर्वप्रेमी हिमांश भन्छन् ‘उनको आँशुले मलाई अझै पिरलिरहेको छ’ – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /Intresting/बलिउड गायिका नेहा कक्कडका पूर्वप्रेमी हिमांश भन्छन् ‘उनको आँशुले मलाई अझै पिरलिरहेको छ’
बलिउड गायिका नेहा कक्कडका पूर्वप्रेमी हिमांश भन्छन् ‘उनको आँशुले मलाई अझै पिरलिरहेको छ’
एजेन्सी-भारतिय चर्चित गायिका हुन् नेहा कक्कड । बिभिन्न गित गाएर चर्चा बटुल्न सफल भएकी नेहालाई मन नपराउने सायद कम होलान् ।
आफ्ना हरेक दुखलाई पार गरेर नेहा अहिले आफ्नो करीयर तर्फ लागेकी छिन् । आखमारे गितबाट हिट भएकी नेहा गित गाउदा गाउदै स्टेजमानै रोएकी थिइन् । लामो समय देखि हिमाम्स कोहिसल सँग प्रेममा रहेकी उनि जब धोका पाएपछि आफुलाई एक्लो महसुश गर्दै आएकी थिइन् । लण्डन ठुमकदा, लड्की ब्यूटीफुल, कर गई चुल, काला चश्मा, जचदा ऐ, जस्ता चर्चित गीतमा आफ्नो आवाज दिने नेहा कक्कड ३१ वर्ष पुरा भएकी छिन् ।
जब उनले धोका दिएपछि नेहाले सामाजिक संजाल मार्फत भिडियो शेयर गरेकी थिइन् । लामो समय देखि प्रेममा रहेका यि दुबै एक्कासी अलग भएपछि फ्यानहरु पनि निरास भएका थिए । हालै भने नेहाका पूर्वप्रेमी हिमांशले बम्बे टाइम्ससँगको अन्तर्वार्तामा केहि कुरा खुलाएका छन् । उनले भनेका छन् ।
उनलाई धोका दिनु यो मेरो जीन्दगीको सबैभन्दा नराम्रो ‘क्षण भोगेको छु’ हिमांशले सामाजिक सञ्जालमा केही लेख्न चाहेर पनि लेख्न नसकेको बताए । नेहा र आफु बिच सहमतिमै ब्रेकअप भएको पनि कुरा खुलाए ।
उनले मुस्कुराउदै भने ‘हामी सहमतिमै छुट्टीएका हौँ, म उसलाई अझै पनि ‘माया र इज्जत’ गर्छु । जब हामि दुबैको ब्रेक अप भयो तब नेहाले सामाजिक संजनल मार्फत अनेक स्टाटस पोष्ट गरेकै कारण त्यसको सजाए आज सम्म मैले भोग्दै आएको छु
दुबई का’ण्ड भन्दै यी युवतिको हेर्नै नसकिने ३ मिनेट ४४ सेकेन्डको भिडियो सार्वजनिक( भिडियो हेर्नुहोस)
जंगलमा १२ बजे राति चि,हान खनेर मान्छे निकाल्दा यस्तो सम्म भयो, आत्मा बोल्दा गाउलेको भागाभाग भएछ (भिडियो सहित)
ज्योति मगर लाई चहियो रे अब घरज्योई बस्ने तन्नेरी केl टो , पूरा जानकारी भित्र !
हेर्नुस् ! फिल्मी हिरो हिरोइनलाई टक्कर दिने नेपाल प्रहरीको डान्स !